Miisaaniyadda ayaa Noqotay Dhab Madoow TCDD 2 Bilyan 558 Milyan Pound Lumis | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTCDD 2 Bilyan 558 Milyan Lumis
18 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD
laakiincesi madow did donusen tcdd billion million rodol ayaa waxyeelo gaadhay
TCDD 2 Bilyan 558 Milyan TL Khasaare The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) koray khasaaraha. Bilyan 2 558 milyan oo rodol oo ah Tareenka Gobolka, oo sanado badan god madow loo rogay, ayaa khasaare soo gaadhay.
SözcüIsmaaciil Sahin sida ay wararku sheegayaan; Kamu Marka loo eego Warbixinta Shirkadaha Dowladda ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda ee sanadka 2018, 2017 wuxuu ku dhawaaqay luminta bilyanka 2 bilyan ee Tareenka Gobolka. 2018'de rikoor-jabinta wadarta dheelitirka xaashida luminta TCDD'nin 27 bilyan ginni sanadihii la soo dhaafay.
KU SOO DHAWAADA BADBAADADA WELD
Hay'addan, oo aan awoodin inay abuurto kheyraad gudaha ah sababta oo ah sanado lumisay, ayaa buuxisa baahiyaheeda kheyraadka iyada oo laga wareejinayo miisaaniyadda wasaaradaha. TCDD, oo ah hay'adda ugu xawilaadda lacagaha ee nidaamka SOE, waxay ku sii haysay muuqaalkan 2018. Maalgashiga 2018 bilyan ee maalgashiga sanadkii 7.4 ee ay hay'addu bixisay, halka bilyanka 3.9 bilyan ee ay qoondeysay Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda lagu wareejiyay wareejinta raasamaalka.
2016, tirada shaqaalaha ee TCDD, halkaas oo 25 kun oo qof ay ka shaqeeyeen, ayaa hoos ugu dhacday 2017 kun 14 468. Sannadkii hore lambarku wuxuu ahaa 1.4 kun 14, oo hoos udhacay in ka badan boqolkiiba 263. Wadarta guud ee kharashaadka shaqada ee hay'adda ayaa kordhay boqolkiiba 2018 boqolkiiba 13.1 bilyan 1 milyan oo rodol. Laga soo bilaabo 356, TCDD waxay leedahay wadarta guud ee caadiga ah ee 2018 kun 9 kiiloomitir iyo kun kun 131 kiiloomitir oo tareenno xawaare sare leh, oo ay ku jiraan 2 kun 396 iyo 11 kun 527.
Bilyan 3 Milyan 650 Milyan Lira 'Dammaanad' 'Mashaariicda Mega…
Laga soo bilaabo Miisaaniyadda 2019 ilaa TCDD 7 Million TL
Damaanad-qaadyada Rakaabka ee Mashaariicda BOT Dadweynaha 65 Milyan…
tcdd lambarka shaqaalaha